အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မနံတာ အတွက် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ
Posted by တီချမ်း at 2:44 AM
နွေးနေခြည် September 29, 2011 at 8:31 AM
ကျေးဇူး တီရေ... စားချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ
ခရစ္စတလ် September 29, 2011 at 8:56 AM
ဘယ်နေ့က ချက်လိုက်တာပါလိမ့် လွတ်သွားတာ နာသကွာ :(
wai September 29, 2011 at 9:30 AM
ကြုံတုန်းဆော်လိုက်သေးတယ် "တချို့ ကိုကိုပို မမပိုတွေက အချိုမှုန့် မသုံးချင်ဘူး ဘာညာ ရှိပါတယ်။"
Vista September 29, 2011 at 9:40 AM
တီချမ်း September 29, 2011 at 10:35 AM
နနခရေ လုပ်လေ ကြာသလားလို့
ဒေါ်သလင်း ချက်တာ ၂ လပိုင်းကလေ ရန်ကုန်မှာ ဟိ
မဝေ တိုက်ဆိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုပြောတယ်ထင်နေတာပါ ဟိ
ဘန်ကောက်နား (၃ နာ၇ီအကွာလောက်က အီတလီ မြို့လေးအကြောင်း) ကို အချိန်ရခဲ့ရင် မမေ့ပါနဲ့ နော်။ ရေးပေးပါအုံး ..တီ
များတို့ ကတော့ မနေ့ က ချက်ထားတဲ့ ဝက်လက်စွတ်ပြုတ်ပိုနေရင် ဒီနေ့ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ညားပြီသာမှတ် ဒီနေ့ ကျန်တဲ့ဟာနောက်နေ့ မစားချင် မဝဲလဲမဝဲရက်တဲ့ သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်လေ
SHWE ZIN U September 29, 2011 at 2:03 PM
ချက်လိုက်မယ် ကြာသလားလို့ ကောင်းလိုက်မဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ
seesein September 29, 2011 at 3:10 PM
ကော်ရည်နဲ့ မှဘဲ သရေယိုတော့တယ်
ကျေးဇူးပါ ဖတ်ပြီး သူများကို ချက်ခိုင်းမယ်
တီချမ်း September 29, 2011 at 3:20 PM
ဖြိုးရေ ရေးမှာ ရေးမှာ ရေးကိုရေးရအုံးမှာ ဒေါ်သလင်း က ကော်မရှင်မပေးသေးလို့ စောင့်နေတာ သူပေးတာနဲ့ ရေးမှာ ဟိဟိ
အနောနိမတ်စ် ဝက်လက် ကို ပြစ်ပြစ်လေး ချက်လိုက်ပြီးတော့ ရေစိမ်လေးနဲ့ ဝက်လက် ခေါက်ဆွဲ လုပ်စားလဲ မိုက်တယ် လမ်းမတော်နားကလိုလေ စားချင်လာပြီ မနက်ဖြန် ဒီအချိန်ဆို ရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုတော့ သွားဆွဲမယ်ဟေ့
ဦးရွှေဇင် ခုတလော တောင်းဆိုတာ အကုန်လုပ်ပေးနေတယ်နော် ဧရာဝတီဆိုလဲ ဧရာဝတီ ချက်ဆိုလဲချက်
စည်းစိမ် တီ့လို ယောက်ျားယူလိုက် ပြီးတော့ စားချင်တာ ချက်ခိုင်း ဟိ
တီရေ... ကော်ရည်ချက်ထားတာ စားချင်စရာလေး။ မှိုများရင် ပိုကြိုက်တယ်ဗျ။ ခေါက်ရိုင်နားက စပျစ်ခြံတွေရှိတဲ့ အီတလီမြို့လေးဆိုတာ ပတ်ချောင်းကို ပြောတာလား။ ဒါမှမဟုတ် Flora fantasia ရှိတဲ့ မြို့လေးကို ပြောတာလားဗျ။
တီချမ်း September 30, 2011 at 12:40 AM
leo ရေ palio khao yai walking street ကိုပြောတာပါ
Coral September 30, 2011 at 8:35 PM
Talking lay tweayan kyaik tal....
Crystal October 6, 2011 at 1:05 PM
တီချမ်းရေ ကော်မစ်ရှင်ကို ပေးမယ်လေဟယ် ရေပေါတဲ့အခါပေါ့ ... :P
ကိုထွန်း October 28, 2011 at 5:16 AM
ချားချင်တယ်၊ တား တား ချားချင်တယ်၊ တီတီ တားကို ကျွေးဦးနော် ..
jr November 16, 2011 at 4:09 PM
တီ ခရီးတွေထွက်နေတာလား။ နေကောင်းတယ်ဟုတ်?
ဘယ်နားရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာလာရေးသွားတယ်။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ငမ်း ရင်းနဲ့။း)
Mie Lay July 31, 2012 at 11:53 AM
တီ ဘယ်တော့စားရမှာလဲ။ မချက်တတ်ဘူး။ တီချက်တာပဲစားချင်တယ်။
khin yamone October 9, 2012 at 10:22 PM
တီချမ်းတစ်ယောက် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ လူမူရေးအလုပ်တွေလုပ်နေတာကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်..